विद्यालय उमेरमै विवाह | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
२०७८ साउन ५, मङ्लबार, ८: ४३AM
कैलाली । कैलालीकी १४ वर्षीय सुगन्धाले ९ कक्षामा पढ्दापढ्दै सँगै कक्षामा पढ्ने सोही उमेरका युवकसँग भागी विवाह गर्नुभयो । सुगन्धाले विवाह गरेपछि विद्यालयमै खैलाबैला भयो ।
भारतमा गएर कुबेरले होटलमा भाँडा माझ्ने काम गरेर घरमा सामान्य खर्च पठाउन थाल्नुभयो । कलिलै उमेरमा आमा बनेकी सुगन्धाले बच्चाको राम्ररी स्याहार गर्न नसक्दा बच्चा कुपोषित बन्यो । हाल बच्चा अस्वस्थ छ ।
“बच्चालाई नियमित औषधि गरिरहनुपरेको छ । सँगै बसौँला भनी विवाह गरेका हामी आर्थिक समस्याले सँगै बस्न पाएनौँ”, सुगन्धाले भन्नुभयो, “हाल विवाह पछुतो भएको छ । भागेर विवाह गरेकी भनेर माइतीले पनि सहयोग गर्दैनन् । घरमा पनि काम गरिन भनेर झगडा भइरहन्छ, घर न घाटको भइयो ।”
विगतमा उमेर नपुग्दै अभिभावकले गरिदिने मागी विवाह अहिले भागी ९प्रेम० विवाहका नाममा बढ्दै गएको छ ।
विगतमा अभिभावकको मञ्जुरीमा उमेर नपुग्दै गरिने विवाह हाल माया प्रेमका नाममा बालबालिकाले आफैँ गर्न थाल्दा बालविवाह न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको छ ।
अझ पढ्दापढ्दै कक्षा ९÷१० मा पढ्ने बालबालिका विवाहको बन्धनमा बाँधिएका देख्दा शिक्षकको मन दुख्छ तर मन दुखेर के गर्नु रु शिक्षकले सम्झाउने हो तर रोक्न सकेको अवस्था छैन ।
मोति मावि मोतिनगरका प्रधानाध्यापक दीपककुमार दास आफू विद्यालयमा सरुवा भएर आएको छ महिना पुगेको बताउनुहुन्छ । “कक्षा १० मा ७ जना किशोरी विवाहित छन्, कक्षा १० पढ्नेको उमेर १६÷१७ भन्दा बढी त हुन्न”, प्रधानाध्यापक दासले भन्नुभयो, “विवाहित किशोरीलाई पढ्ने वातावरण हुँदैन । घरको काम गर्नुपर्दा उनीहरु पढाइमा पछाडि पर्छन् ।”
प्रअ दास समाजले कम उमेरमा हुने विवाहलाई सहजै मान्यता दिँदा समस्या भइरहेको बताउनुहुन्छ । “यसरी किशोरी विवाहको जिम्मेवारी बोकेर कसरी पढ्न सक्छन्, पढाइ निरन्तर नुहँदा बीचैमा छोड्छन्, विवाहबाटै उनीहरुको जीवन बर्बाद हुन्छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “एकजना शिक्षिकालाई बालविवाहविरुद्ध जनचेतना जगाउन सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा तोकेका छौँ ।
नियमित विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा बालविवाहविरुद्ध भएको व्यवस्थाबारे जानकारी दिन्छौँ, तर रोक्न सकिएको छैन ।”
चार जनाजति किशोरी भर्ना हुन आएनन्, किन नआएको भनी बुझ्दा विवाह भइसकेको जानकारी पायौँ”, प्रधानाध्याक भण्डारीले भन्नुभयो, “लकडाउनमा अझ विवाह बढेको छ । पढाइ छैन भन्दै केही किशोरी विवाह गरेर गएका छन् ।”
विद्यालयको पाठ्यक्रममा पनि बालविवाह गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । गत वर्ष जानकी गाउँपालिकाको बालज्योति माध्यमिक विद्यालयमा अध्यनरत एक बालिकाको विवाहको निम्तो विद्यालयलाई आयो तर विद्यालयले त्यो विवाह बहिष्कार ग¥यो ।
विद्यालयले बालविवाहविरुद्ध जनचेतना जगाउने काम गरे पनि रोक्न सकेको छैन । प्रधानाध्यापक भोजराज चौधरी विद्यालयमै विवाहको निम्तो आएको तर आफूहरु भोज खान नगएको बताउनुहुन्छ ।
“हामीले कम उमेरमा हुने विवाहलाई बहिष्कार गर्ने हो । बहिष्कार ग¥यौँ”, प्रधानाध्यापक चौधरीले भन्नुभयो, “हामीले ज्ञान दिएर मात्र हुन्न, समाज, अभिभावक सबैले विवाह नै रोक्ने, कानूनी सजाय दिने काम नगरेसम्म रोक्न सकिँदैन ।”
यसका साथै विद्यालयस्तरीय, अभिभावक र किशोरीलाई सचेतना फैलाउने कार्य गरिरहेको जानकी गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख यमुना विष्ट बताउनुहुन्छ ।
“बालविवाह समस्याका रूपमा बढ्दै गएको छ । हामीले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा, विद्यालयमा कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेका छौँ”, विष्टले भन्नुभयो, “चालु आर्थिक वर्षमा पनि अभिभावक र किशोरकिशोरीसँगै राखेर गर्ने खालका विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।”
कानून व्यवसायी बालाराम भट्टराई बालविवाह गरेका बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या निम्तिने भएकाले यसलाई रोक्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुहुन्छ ।
कानून व्यवसायी भट्टराईले सुदूरपश्चिममा ४८ प्रतिशत बालबालिका बालविवाहको जोखिममा रहेका जानकारी दिनुभयो । “सुदूरपश्चिम देशैभरि कर्णालीपछि दोस्रो बालविवाह हुने प्रदेशमा पर्छ, उमेर नपुग्दै हुने विवाह समाज र राष्ट्रकै लागि समस्या हो”, भट्टराईले भन्नुभयो, “गरिबीले पनि विवाह बढेको छ । सुदूरमा २०।९ प्रतिशत बालबालिका श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् ।”
जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरी बालविवाह न्यूनीकरणका लागि चेतनास्तर बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
“कानूनले बालविवाहलाई मान्यता दिँदैन, बालविवाहका असर धेरै छन्, कानूनी अधिकार नपाए जीवन असुरक्षित हुन्छ”, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “बालविवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा भएर पनि समाजले स्वीकारिरहनुले न्यूनीकरणमा चुनौती थपिएको छ ।”
अघिल्लो लेखमाबुद्धशान्ति गाउँपालिका एक हप्ताका लागि सिल
अर्को लेखमाशिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा पक्राउ